YEYINTNGE(ကနဒေါ): Monday, November 05
CFOB in crisis with Rohingya issue
After hesitation for months, I've now decided to inform our network that Canadian Friends of Burma (CFOB), that has bee working in support of democracy and human rights in Burma since 1990, has been going throughacrisis and under enormous pressure to side with 'Rohingya' Muslim in ongoing conflict with local Buddhist Rakhine community in Burma. The pressure is up toapoint that CFOB was forcefully suspended fromagroup of NGOs –Canadian NGOs Committee on Burma (CNC).
In particular, Ottawa-based Inter Pares,akey member NGO of CNC, consistently put pressure on CFOB to stand with 'Rohingya' Muslim, to the extent that they cut off their funding and even blocked the funding coming from other sources.
Apparently, this is the act to terminate our work for Burma. CFOB is an independent organization and we are not subordinate to any organization. CFOB stands for human rights for everyone, but we don't want to be seen siding with any group in the conflict. Inter Pares does not seem to understand this point and put enormous pressure to amend our position. We see this as interference in the internal affairs of an independent organization in its policy-making process.
On one hand, we are aware that Inter Pares is using Canadian taxpayers' money from CIDA to support Rohingya media and advocacy groups such as Kalandan Press and Arakan Project with 5% ofatotal CIDA funding each year. These organizations are indeed responsible for sending out false news and exaggerated information to the outside world. It appears that Inter Pares wants CFOB to be part of this wrongly guided campaign. That is something we can not accept and will not accept at any cost.
For this pressure, Inter Pares also seems to have worked closely with Burma Campaign UK (BUCK) that has cozy relationships with many Rohingya Muslim elements in UK and Arab world. And Inter Pares blames CFOB for not being able to work with them. Of course, we work with organizations that are pragmatic, not with radical elements under the banner of so-called human rights.
In fact, CFOB helped secure Inter Pares almost $30 million for Burma border projects since the beginning of funding from the government aid agency, CIDA. CFOB was indeed the platform and the springboard for the funding from CIDA. The latest successful effort was the continuation of the funding from 2010 to 2015 with $3 million each year. CFOB lunchedanation-wide campaign backed up by Burmese communities across Canada in beseeching Prime Minister Stephen Harper to make sure of this funding for Burma. However, Inter Pares does not seem to appreciate our effort and is continuously using unethical acts to disrupt our work for Burma.
Their action isacontradiction to what they call themselves as social justice and human rights organization in Canada and their intent is questionable. If continued, it would definitely tarnish the image of Canada in the eyes of thousands of Burmese-Canadians and 60 millions of Burmese people.
Therefore, I would request you to directly ask Inter Pares' Board of Directors to review its management's tactic in solving the difference with CFOB. Please see their Board of Directors and management team at http://www.interpares.ca/en/who/staff.php
I will also take other necessary actions to save the existence of CFOB from all these destructive acts and keep the operation running as much as it can.
You can also see my position on the conflict in Arakan state of Burma
BY YeYint Nge ... 11/05/20120comment
ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် စက်မှုဇုန် ၄ မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင် မြူးနှင့်ဇူး အထည်ချုပ်စက်ရုံက အလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော် ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ အလုပ်သမား ၆ ဦးကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်က တရားရုံးတွေက စတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
ား ကိုလှမင်းထွန်း၊ ကိုနိုင်ဝေလင်း၊ ကိုမျိုးမင်းအောင်၊ ကိုပြည်စိုး၊ မအေးအေးမျိုးနဲ့ မယဉ်ယဉ်ခန့်တို့ (၆) ဦးဟာ ဒီကနေ့မှာပဲ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကနေ တဆင့် လှိုင်သာယာ မြို့နယ် တရားရုံးမှာ ထပ်မံ စစ်ဆေးခံရဖို့ ရှိသေးတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင် မြူးနဲ့ဇူး (MYUE & SUE) အထည်ချုပ် စက်ရုံက အလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က အခြေခံလုပ်ခလစာ တိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် စက်ရုံရှေ့ကနေ လေးမိုင်လောက် အကွာအဝေးရှိတဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရုံးကို လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။RFA Burmese ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ် စက်မှုဇုန် ၄ မှာရှိတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင် မြူးနှင့်ဇူး အထည်ချုပ်စက်ရုံက အလုပ်သမား ၁၀၀၀ ကျော် ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခေါင်းဆောင်တဲ့ အလုပ်သမား ၆ ဦးကို ဒီကနေ့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှာ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်နဲ့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်က တရားရုံးတွေက စတင်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ တရားစွဲခံရတဲ့ အလုပ်သမ...ား ကိုလှမင်းထွန်း၊ ကိုနိုင်ဝေလင်း၊ ကိုမျိုးမင်းအောင်၊ ကိုပြည်စိုး၊ မအေးအေးမျိုးနဲ့ မယဉ်ယဉ်ခန့်တို့ (၆) ဦးဟာ ဒီကနေ့မှာပဲ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တရားရုံးကနေ တဆင့် လှိုင်သာယာ မြို့နယ် တရားရုံးမှာ ထပ်မံ စစ်ဆေးခံရဖို့ ရှိသေးတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံသားပိုင် မြူးနဲ့ဇူး (MYUE & SUE) အထည်ချုပ် စက်ရုံက အလုပ်သမား တစ်ထောင်ကျော်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့က အခြေခံလုပ်ခလစာ တိုးမြှင့်ပေးဖို့အတွက် စက်ရုံရှေ့ကနေ လေးမိုင်လောက် အကွာအဝေးရှိတဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်က ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အလုပ်သမား ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနရုံးကို လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။
လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်များတွင်ပြုလုပ်မည့် SamsungGalaxy Mini ဟန်းဆက်များအား မဲနှိုက်ကာ ၅၀၀၀
နိုဝင်ဘာ ၃ ရက်နေ့တွင် လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်များတွင်ပြုလုပ်မည့် Samsung
Galaxy Mini ဟန်းဆက်များအား မဲနှိုက်ကာ ၅၀၀၀
လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်မှ အထွေထွေမန်နေဂျာ ဦးကိုကိုအောင်က ''ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ မနက် အစီအစဉ်ကို လုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် ဖျက်လိုက်တယ်။ လူမနိုင်လို့ ဖျက်လိုက်ရတာပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင် ဒီအစီအစဉ်ကို ပြန်လုပ်ဖို့ ရှိပါတယ်။''ဟု Eleven Media Group သို့ နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက် (ယနေ့) နံနက်ပိုင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
''စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ရောင်းပေးဖို့အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ ဆိုင်တွေကိုလည်း လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ
ပိတ်ထားရတယ်။ Customer တွေကိုလည်း အနူးအညွတ် တောင်းပန်ပါတယ်။'' ဟု လူကြီးမင်းဖုန်းဆိုင်မှ တာဝန်ရှိသူက ပြောကြားခဲ့သည်။
''ပဲခူးကနေ နံနက် ၄ နာရီတည်းက လာရတာပါ။ ဒီကိုရောက်တော့ နံနက် ၇
နာရီလောက်ရှိပြီ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်နဲ့အတူ လာတာပါ။ အလုပ်ပျက်
အကိုင်ပျက်ဖြစ်တာပဲအဖတ်တင်တယ်။ ကျွန်တော့်လိုပဲ အဝေးကြီးကနေလာတဲ့သူတွေ
အများကြီးတွေ့ရတယ်''ဟု လူကြီးမင်း(လသာ)ဖုန်းဆိုင်သို့ ပဲခူးမြို့မှလာ
''နံနက် ၆ နာရီလောက်တည်းက ဒီကိုရောက်နေတာပါ။ တောင်ဥကလာပ နေလာတာပါ။ အဲဒီအချိန်လောက်
လူမများသေးဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့လူများလာပြီးထိန်းမနိုင် သိမ်းမရတွေဖြစ်လာတယ်။ တန်းစီ ခိုင်းလည်းမရတော့ဘူး။
ရှေ့မှာရောက်နေတဲ့သူတွေက နောက်မဆုတ် ပေးချင်ကြဘူးလေ''ဟုတောင်ဥကလာပမှလာရောက်သူတစ်ဦးကပြောပြခဲ့သည်။
နံနက် ၈ နာရီခွဲနှင့် ၉ နာရီကြားတွင် ကူပွန်များဝေရန်တန်းစီခိုင်းသော်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကူပွန်များကို
ပစ်ကြဲပြီးဝေခဲ့သေးကြောင်း၊ ထို့နောက် များပြားသောလူအုပ်ကြောင့်ထိန်းသိမ်းရခက်ကာ အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းကြောင်း ကြေညာခဲ့ကြောင်း၊လူအုပ်အတွင်းမှ လူအချို့မှာ ဆိုင်ကိုခဲများဖြင့်ပစ် ပေါက်ခြင်း၊ဆိုင်တံခါးကိုထုရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်း၊
လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများ လာရောက်ထိန်းသိမ်းရကြောင်း၊ လာရောက်သူအချို့မှာ မိမိတို့၏ ဟန်းဖုန်းများ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊
ထို့ပြင် လူကြီးမင်း(လသာ) ဖုန်းဆိုင်အနီးရှိမိုဘိုင်းဖုန်းအရောင်းဆိုင်အချို့မှာလည်း ဆိုင်ပိတ်ထားရကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
Western Union မြန်မာပြည်ကိုလာပြီ။
US က ငွေလွှဲ ကုမ္ပဏီ Western Union မြန်မာပြည်ကိုလာပြီ။ Photo: YMT
ငွေလွှဲခကတော့ကြောက်စရာပါ။၁၀၀၀ကို၅၅လောက်ပေးရမယ်။ဒါပေမယ့်၁၅မိနစ်ပဲကြာမယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ကုဒ်နံပါတ်လက်ခံမယ့်သူကိုပြောပြလိုက်ရုံပဲ။။သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံငွေနဲ့ထုတ်ပေးတဲ့ နေရာမှာလဲနဲနဲတော့ခေါင်းချိုးပါသေးတယ်။အရေးမကြီးရင်တော့ဘဏ်ကလွှဲတာပဲကောင်းပါတယ်။
အားလုံးတန်းစီ ....ကင်မရာမန်း လာပြီ..
‎! Photo Journalist !
Photo by- Nyein Chan Naing , Via- Soe Zeya Tun
ခွင့်ပြုမိန့်မရဘဲ ဆန္ဒပြတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ရုံးတင်...